MakeWebBetter: Woo ma zụlite Ecommerce Azụmaahịa gị na WooCommerce na Hubspot | Martech Zone
Obi abụọ adịghị ya na oke iru Hubspot dị ka CRM na ahịa akpaaka n'elu ikpo okwu na WordPress dị ka Usoro Ọdịnaya Ọdịnaya. N'ihi na ọ bụ ngwa mgbakwunye dị mfe na mgbakwunye, WooCommerce anọwo na-eto eto na mgbasa ozi dịka ikpo okwu ecommerce iji mejuputa ngwa ngwa.
Mgbe WordPress weputara nke ya CRM, ikpo okwu enwegh ntozu oke nke Hubspot maka ikike ịchụpụ usoro maka nnweta na njigide usoro nke nzukọ. HubspotNjikọ ọnụ ọnụ nke njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM) na akpaaka azụmaahịa na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ikpo okwu iji mejuputa na ụlọ ọrụ na-agbanwe usoro azụmaahịa ya na inbound.
N'akụkụ nke ọzọ nke nhazi, Hubspot'CMS' etoliteghi dika WordPress, ha adighi enyekwa udiri azịza nke ahia o bula. Ọ bụrụ na azụmahịa gị chọrọ uru niile nke CRM, ecommerce azịza ya, yana ahịa akpaaka… ị ga-agbakọ. Obi dị m ụtọ, Hubspot na WordPress nwere atụmatụ siri ike na ntinye ọnụ na ụdị ahịa ahịa zuru ụwa ọnụ na enwere ngwọta ịhọrọ site na nke ahụ.
MakeWebBetter: Hubspot na WooCommerce
Companylọ ọrụ m na - enyere aka itinye ma jikọọ azịza ya na mbọ ya dị oke ọnụ. Consultgba ndị ndụmọdụ na mmepe mmepe nwere ike na-efu ụlọ ọrụ ọtụtụ narị puku dollar - ịghara ịdebe mmezi na-aga n'ihu na nkwalite a na-achọkarị. N’ihi ya, ihe mbụ anyị ga - eme dịka ndị ndụmọdụ bụ ịchọpụta ihe ga - emepụta ihe ndị a nabatarala nke nwere ezigbo aha.
MeeDebBetter bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ… ọ bụghị naanị otu ndị mmepe ngwa mgbakwunye, mana ụlọ ọrụ na-enyere aka mejuputa ma rụọ ọrụ Hubspot na ndị ahịa WordPress. Ha bu ndi otu Gold nke Hubspot Mmemme Onye Mmekọ Ngwọta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha nwere ihe ndị raara onwe ha nye iji nọgide na-emeziwanye, na-agbanwe agbanwe, ma na-echekwa azịza ha.
Kpọtụrụ ya Hubspot na WooCommerce, ngwa mgbakwunye ha na nhọrọ ọrụ nhọrọ ga-enyere gị aka ijikọta isi data abụọ ahụ, nyefee ọrụ ecommerce ahụ Hubspot, ma mee ka data nweta maka nkeonwe, nkwukọrịta nkewa nkewa iji nyere aka mee ka ntụgharị na nwepu ohere.
Otu esi emekota Hubspot na WooCommerce
Mee nkeWebBetter Hubspot na njikọta WooCommerce nwere ike nweta na 5 isi nzọụkwụ:
Jikọọ ụgbọ ahịa WooCommerce gị na HubSpot
Kpebie ubi gị na otu omenala iji tinye ọnụ na HubSpot
Ekekọrịta ndu gị na HubspotNdepụta Smart na recency, ugboro ole, na ego (RFM) nkewa.
Kwado rụọ ọrụ ecommerce ahịa arụ ọrụ na Hubspot iji mee ka mgbanwe gbanwee.
Mee akụkọ iji were anya nke uche hụ ire ahịa na azụmaahịa gị.
Arụ ahịa azụmaahịa Ecommerce dị na mbụ gụnyere:
Wepu Cart Recovery Iweghachite Workflow - Na - enyere gị aka nwetaghachi ụgbọ ala agbahapụ ma hapụ ndị ahịa gị ka ha mechaa zụọ ha site na usoro ozi ịntanetị, na-enye Kupọns ego
Nabata Ndị Ahịa Ọhụrụ & Nweta Usoro Ntugharị Nke Abụọ - Email a na - ebute mgbe azụtara nke mbụ ma mebe ya iji nye ndị ahịa gị ọdịnaya bara uru nke na - atọ ha ụtọ.
Chepụta MQL Conversion Workflow - Usoro ọrụ a ga - enyere gị aka ịzụlite azụmaahịa azụmaahịa ruru eru (MQLs) nke ụlọ ahịa gị. Ọ na-elekwasị anya n'ịtụgharị ndị ahịa. Usoro ọrụ a ga-emepụta ezigbo ozi ịntanetị na-akpaghị aka ma zipụ ya na MQLs n'oge kwesịrị ekwesị.
Ngụkọta ROI - Usoro ọrụ a ga - enyere aka ịgbakọ Return On Investment (ROI) maka mkpọsa ahịa dị iche iche dịka MQL Nurturing, Welcome New Customer and Get 2nd Order na na.
Soro Nurture - Ọtụtụ, eleghara anya. ka, kacha mkpa. A obere focused workflow ezubere iji mee ka gị na ndị ahịa gị nwee njikọ n'oge njem ndị ahịa niile. Usoro nke ozi ịntanetị na ozi pụrụ iche, azụmahịa, wdg na ọtụtụ ndị ọzọ.
MeeDebBetter Hubspot na WooCommerce WordPress ngwa mgbakwunye
Hubspot WooCommerce Integration Pro - ngwọta ahịa akpaaka na ahịa ahịa siri ike, nke na-enyere ndị ahịa eCommerce aka ịgbanwe iji duru ndị ahịa. Ọ bụ ngwanrọ ngwanrọ dị njikere iji WooCommerce (na-eduga n'elu ikpo okwu e-commerce na ahịa na-ekpuchi 30% nke weebụsaịtị niile) na HubSpot. HubSpot bụ ngwa ahịa ahịa ahịa zuru oke maka WooCommerce.
Malite na Hubspot na Mmekọrịta WooCommerce
Hubspot mmekọrịta WordPress Onye ọrụ - Gbanwee usoro nke ịmekọrịta ozi ndị ahịa gị niile na HubSpot maka nnweta ngwangwa na usoro ime mkpebi ọfụma. Site na Field to Field Sync maka HubSpot, ị nwere ike ịchekwa ngwa ọrụ HubSpot na mpaghara ndị ọrụ WordPress.
Hubspot WooCommerce Agbaghaala Ntanye ppingzụ ahịa nke Iweghachite - nwetaghachi ahịa nke ụlọ ahịa WooCommerce gị gbahapụrụ site na iziga ndị ahịa gị ihe ncheta email akpaaka, bụ ndị hapụla e-ụlọ ahịa gị na-emezughị nzụta.
HubSpot Nweta Quote - ihe ahia ahia ahia n’ile nke n’enye gi ohere imekọtara ọnụ iji jikọta ikike ị ga - eduga, jikwaa arịrịọ ị na - arịọ ma gbanwee ha n’ahịa, site na HubSpot CRM gị (CRM kachasị ike) yana, setịpụ ntọala ya mpaghara.
Mmekọrịta HubSpot maka ndị otu WooCommerce - na - enyere gị aka ịhazi ndị otu saịtị gị ka HubSpot na - emekọ ihe banyere nkwekọrịta dị mkpa, atụmatụ yana ụbọchị mmeghe na mmechi.
Mmekọrịta HubSpot n'otu onye ọrụ - na-enye ndị ọrụ ohere ịgbanwe ire ahịa a na-ere n'ime HubSpot na-arụ na usoro azụmahịa kwesịrị ekwesị, arụmọrụ na-akpaghị aka, ego, na ụbọchị mmechiNyochaa ngwaahịa gị, ọnụ ahịa na ego ha nwetara site na Pipeline E-commerce na WooCommerce Sales Pipeline na E-commerce Insights Dashboard emere ọhụụ.
HubSpot di omimi Coupon Code Generation - ihe nlezianya niile na - eme ihe na - akpaghị aka na - emepụta koodu coupon dijitalụ na-agbapụta naanị otu oge, dabere na ọkwa HubSpot RFM nke ndị ahịa gị ugbu a.
Lelee Ngwaahịa na Ọrụ niile nke MakeWebBetter
Tags: agbahapụ ịzụ ahịagbahapụrụ ụgbọ ibu azụmahịaCRMecommerce ahịa akpaakaugborookpokoroHubSpot CRMImewebbetterahia ruru eruegommkwịzụlite na-edugaazụlite workflowkeonweịlaghachi azụrecency ugboro egormNkebi rfmROIroi arụ ọrụusoro nhazi nke abụọnkewaịzụ ahịa ịzụ ahịa mwekotandepụta mara mmannabata emailwoocommerceWordPresswordpress plugin